सर्वाधिक विवादमा रहेका ७ बलिउड फिल्म
एजेन्सी । बलिउडकी एक अभिनेत्रीले भनेकी थिइन्,‘बलिउडमा तीन चीज मज्जाले चल्छः हिन्दी फिल्मका गीतहरु, शारुख खान, सलमान खान र सेक्स ।’ फिल्महरुमा यति फ्याक्टरहरु नहुने हो भने अपुरो हुने उनले बताएकी थिइन् ।
तर पछिल्लो समय शाहरुख खानबाहेक अरु अभिनेताले फिल्म चल्ने गरेका छन् भने गीत र सेक्सको क्रेज भने कत्ति पनि घटेको छैन । फिल्मको स्क्रिप्टले डिमाण्ड गर्छ भने उनीहरु जस्तो सुकै बोल्ड सिन दिन पनि तयार रहन्छन् । केही यस्तै सेक्स सिनका कारण पनि फ्रिमा पब्लिसिटी पाउने स्टारहरु पनि उस्तै रहेका छन् । केही यस्तै बलिउड सेक्स सिनहरु छन् जसले बलिउडमा ठुलो चर्चा पाएका थिए ।
१. वि.ए पास
‘चक दे इण्डिया’ फिल्ममा सर्पोटिङ रोलमा काम गरेकी शिल्पा शुक्लाले बि।ए पास फिल्ममा सेक्सी अन्दाज पस्किइन् । उनका ती दृश्यहरुले दर्शकहरुलाई आश्चर्यमा पारेको थियो । फिल्ममा अत्यन्त हट सिनहरु रहेका थिए । यही कारण पनि उनी लामो समय चर्चामा रहेकी थिइन् ।
सन् २००३ मा आएको फिल्म ‘जिस्म’ ले बिपासा बासुलाई बलिउडको उचाईमा पुर्याउन ठुलो मदत गर्यो । जोन अब्रहामसँग उनले दिएको सेक्स सिनका कारण बलिउडमा ठुलै हंगामा मच्चिएको थियो । फिल्ममा रहेका हट सिनहरुका कारण फिल्मलाई एडल्ड सर्टिफिकेट दिइएको थियो । यस फिल्मा सेक्स सिनका साथै लिपलक सिनहरु धेरै रहेका थिए ।
बलिउडकी स्टाइलिस जोडी सैफअली खान र करीना कपुरको फिल्म ‘कुर्बान’मा अत्यन्त सेक्सी सिनहरु रहेका थिए । यिनीहरुको हट केमिस्ट्री कारण फिल्मले पनि ठुलो पब्लिसिटी पाएको थियो । तर फिल्मले बक्सअफिसमा कुने कमाल भने गर्न सकेन । यस फिल्ममा करीना अर्धनंग्न समेत थिइन् ।
४. शुटआउट एट वडाला
यस फिल्ममा जोन अब्रहाम र कंगना रणावतले दिएको हट सिनले बलिउडमा ठुलै सनसनी मच्चाएको थियो । यी जोडीले दिएको सेक्स सिनका कारण पनि दर्शकहरु हलमा आएको बताइएको थियो । फिल्मले खासै सफलता नपाए पनि उनीहरुको त्यस सिनलाई लिएर दर्शकहरुले खुबै सिटी भने बजाएका थिए ।
५. एक पहेली लिला
सन्नी लियोनले यस फिल्ममा अत्यन्त उत्तेजक सिनहरु दिएकी थिइन् । यस फिल्ममा सेक्स र हट सिन भएका कारण पनि दर्शकहरु हलमा तानिएका थिए ।
६. हेट स्टोरी १, २, ३
हेट स्टोरीका तीन पाटर््समा सेक्स सिनहरुलाई ठुलो महत्वका साथ प्रस्तुत गरिएको थियो । पहिलो पार्टमा अभिनेत्री पौली डामले बोल्ट र इन्टिमेट सिन दिएर ठुलो चर्चामा रहिन् । दोस्रो पार्टमा सुरवीन चावलाले ग्ल्यामर र सेक्स दर्शकहरुमाझ पस्किन् । तेस्रोमा जरिन खान र डेजी शाहले सबै सिमा तोड्दै सेक्स सिनहरु दिए । यस फिल्मका पार्टहरुले बक्सअफिसमा राम्रै कमाइ गरे ।
७. रागिनी एसएमएस २
सन्नी लियोनले यस फिल्ममा यस्ता हट सिनहरु दिइन जसका कारण उनलाई भारत छोड्न केही महिला संघसस्था नै लागि परे । उनले यस फिल्ममा सावरमा दिएको सिन कुनै एडल्ट फिल्मको भन्दा कम थिएन । यस फिल्म उनले आफ्ना सह अभिनेत्रीसँग लिपलक सिन दिएकी थिइन् ।